I-ZTE Blade A5 2019: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa | I-Androidsis
I-ZTE sele isishiyile iifowuni ezininzi ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Inkampani iveze iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ifowuni yakho yokuqala ye-5G, ebesiyilindile ixeshana. Isixhobo esithi iqala ukuthengisa kwiimarike ezahlukeneyo kwezi veki. Umenzi waseTshayina ngoku usishiya ngemodeli entsha, ngeli xesha kuluhlu lokungena. Le yiZTE Blade A5 2019.
I-ZTE Blade A5 2019 ibonisiwe njengongeniso lomenzi kwi-Android Go. Olu hlobo lwenkqubo yokusebenza Ifumene ukuthandwa okuninzi kwisiphelo esisezantsi, kuba inika amava omsebenzisi angaphezulu. Ngesi sizathu, umenzi waseTshayina naye uyayijoyina.
Oku kucinga ukuba ifowuni isishiya sinemilinganiselo ethobekileyo, ngokoluhlu lwayo. Nangona ubukho bale nguqulo yenkqubo yokusebenza yinto enokubanceda ukuba basebenze ngcono ngalo lonke ixesha. Ixabiso layo, njengoko kulindelwe, lithembisa ukuba nayo iya kuba yinto enomdla kwesi sixhobo.
1 Ukucaciswa kweZTE Blade A5 2019
Ukucaciswa kweZTE Blade A5 2019
Bekulixesha elide okoko safumana inqanaba lokungena lophawu. Kodwa ekugqibeleni sele sinayo, abanokuthi bathengise ngayo kakuhle kweli candelo lentengiso. I-ZTE Blade A5 2019 iyamangalisa kuyilo olulula, Ngaphandle kobukho benotshi yalo naluphi na uhlobo, esiya rhoqo kuluhlu lwe-Android. Endaweni yoko, babheja kwizakhelo eziphawulwe kakuhle ezingasentla nezisezantsi. Ukucaciswa kwefowuni:
Isikrini: 5.45 intshi ngesisombululo se-HD + (1440 x 720) kunye ne-18: 9 ratio
Inkqubo: I-Spreadtrum SC9863A
Ukugcinwa kwangaphakathi: i-16 GB (iyandiswa ngekhadi le-MicroSD)
Ikhamera yangaphambili: 8 MP nge f / 2.4 ukuvula
Ikhamera esemva: 13 MP nge f / 2.0 ukuvula
Inkqubo yokusebenza: I-Android 9 Pie (uhlelo lweGo)
Ibhetri: 2600 mAh
Ukunxibelelana: I-WiFi 802.11 b / g / n, iBluetooth 4.2, i-microUSB, i-minijack, i-GPS, i-S
Imilinganiselo: 146,3 x 70,6 x 9,55 mm,
Ubunzima: 157 gram
Njengoko sibona, ifowuni inezinto ezichaziweyo ezifanelekileyo kuluhlu lwazo. Kule meko, i-ZTE Blade A5 2019 ayongezi kwimo yezikrini ezinkulu kunee-intshi ezi-6. Bashiyeke ngobungakanani be-intshi ye-5,45, kunye nesisombululo se-HD +. Isikrini esihle kolu luhlu, oluza neefreyimu eziphezulu kunye nezisezantsi eziphawulwe. Iprosesa abayisebenzisayo kule meko yiSpreadtrum SC9863A, eyaziwayo kuluhlu lokungena. Kunye nayo kuza indibaniselwano enye ye-RAM kunye nokugcinwa, i-2/16 GB kule meko.
Ifowuni isishiya nekhamera enye kwicala ngalinye. Umphambili we-8 MP kunye nangemva kwe-13 MP. Ngaphezulu kweekhamera ezaneleyo kwisixhobo soluhlu kwi-Android. Kwibhetri, sifumana ibhetri yamandla angama-2.600 mAh. Ngokomgaqo kufuneka ibenokwanela ukuzimela, ngenxa yokusebenzisa i-Android Go kwaye ayisiyiyo isixhobo esiza kudla kakhulu ngokubanzi. Njengoko kuqhelekile kwiifowuni ezikweli candelo lentengiso, I-ZTE Blade A5 2019 ayinaso isivamvo somnwe. Akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokuvula ubuso nokuba.
I-ZTE Blade A5 2019 ibonisiwe yathengiswa eRashiya. Ngale ndlela, ilizwe lelokuqala ukukwazi ukufikelela kwesi sixhobo ngokusemthethweni. Asazi nto malunga nokuqaliswa kwayo kwezinye iimarike, kwaye yenye yezona zinto zingathandabuzekiyo. Kuba kuqhelekile ukuba ezi ntlobo zeefowuni ezisezantsi azikhutshwa kwihlabathi liphela. Kungenxa yoko le nto sinethemba lokuba neendaba kungekudala malunga noku malunga nokusungulwa kwayo kwamanye amazwe.
Ifowuni sele ithengisiwe eRashiya ngexabiso lama-ruble angama-6490, emalunga nee-90 zeerandi zokutshintsha. Ngaphandle kwamathandabuzo, ixabiso elifanelekileyo lefowuni kweli candelo, elinokuthi lifikeleleke kubasebenzisi abaninzi. Ithengiswa ngemibala emibini, eluhlaza okwesibhakabhaka nomnyama, enokubonakala kule foto. Siyathemba ukuba siza kuba neendaba kungekudala malunga nokuqaliswa kwamazwe aphesheya kwale ZTE Blade A5 2019.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-ZTE Blade A5 2019: Uluhlu olutsha lwentengiso